CENI Foibe: Nidina taty Mahajanga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana
samedi, 02 décembre 2017 09:54
Manomboka ny 01 desambra ary mifarana ny 31 janoary 2018 ny fanavaozana ny lisi-pifidianana ataon'ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana ahafahan'ireo olom-pirenena rehetra manoratra anarana eny amin'ny Fokontany raha tsy mbola tafiditra anaty lisitra, ary ihany koa manamarina izany.
Hatreto mbola 79% n'ny olom-pirenena feno taona no voasoratra anarana anaty lisitra ary mbola mila ampiakarina hatrany amin'ny 11% izany mba ho tonga 90% farafaharatsiny mialohan'ny fifidianana.
Hampitomboina 2000 ihany koa ny isan'ny birao fandatsaham-bato mba hanakekezana ireo toerana saro-dalana any ambanivohitra hampavitrika ny olona hifidy.
Taty Mahajanga no nosafidian'ny CENI foibe hanaovana ny fanentanana ifotony, izay efa nanomboka tamin'ny 29 novambra lasa teo tamin'ny alalan'ny fidinana ifotony niaraka tamin'ireo mpanentana avy amin'ny CENI.
Ankoatra izay, Fokontany efatra no nosafidiana manokana hanaovana cadre de concertation niadiana hevitra mivantana mahakasika ny sakana tsy mampazoto na tsy ahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana ao anaty lisi-pifidianana. Teny amin'ny fokontany Manga, Manjarisoa, Mahabibo kely ary Marovato Abattoir no nanaovana izany. Nisy ihany koa ny tao amin'ny Tranoben'ny kolontsaina ny 30 novambra.
Fampisehoana narahina fanentanana nanoloana ny Lapan'ny Tanàna no namaranana ny hetsika ny tolakandron'ny zoma.
(Azontsika rehetra atao ihany koa ny manamarina ao amin'ny site CENI raha voasoratra amin'ny lisitry ny mpifidy ny anarantsika, ny anarana sy ny numero karapanondro dia efa ampy ahitana na ao na tsia)
mercredi, 13 décembre 2017 00:07
mardi, 12 décembre 2017 21:20
mardi, 12 décembre 2017 07:29
mardi, 12 décembre 2017 03:21
lundi, 11 décembre 2017 10:43
dimanche, 10 décembre 2017 17:10
samedi, 09 décembre 2017 22:29
samedi, 09 décembre 2017 20:06
samedi, 09 décembre 2017 16:17
samedi, 09 décembre 2017 06:22